နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနှင့် အင်အားစုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလဲ ပြီးသွားပါပြီ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ အခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တကြိမ်ဆိုပြီး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပလာတာ ၃ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါပြီး။ လွှတ်တော် သက်တမ်း ၂ ကြိမ် ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီး။ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ သက်တမ်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ သက်တမ်းတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အင်အားစုတွေအကြောင်း၊ အခြေအနေ၊ အခင်းအကျင်းတွေအကြောင်းတွေကို ဒီဆောင်းပါးတိုထဲမှာ နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုနှစ် သက်တမ်းအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲလာနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လို အခင်းအကျင်းတွေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုလဲ မှန်းဆကြည့်နိုင်ဖို့ ထည့်သွင်း သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: November 18, 2020
လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်တဲ့ တစ်မဲသာ အနို်င်ရတဲ့ စနစ် FPTP နဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ် PR တို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ် တွေကို အခြေခံပြီး လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စုံလင်ကွဲပြားလှတဲ့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက် ဘယ်စနစ်က ပိိုမို မျှတ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုတွေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စာတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တိမပန်းတိုင် ကတော့ မျှတမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကနေတဆင့် ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီစနစ် ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာလာစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုရှိမှ ပိုမိုပြီး စုံလင်ကွဲပြားတဲ့ လွှွတ်တော်ဖြစ်မှာပါ။ ပိုမိုပြီး စုံလင်ကွဲပြားတဲ့ လွှတ်တော်ဖြစ်မှ အားလုံးပါဝင်မှုရှိတဲ့ အင်စတီဂျူးရှင်းတွေနဲ့ စုပေါင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းတွေ ဖော်ဆောင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ပိုမို တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်သာမကဘဲ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက်လဲ အထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့ ခြေလှမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: November 6, 2020
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
"တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲပေးခြင်းဖြင့် အခွင့်အရေးပိုရလာမယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ...... ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ NLD လက်အောက်ကနေ အခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်။"
"... ဘယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့မှ အဟာမိတ်ဖွဲ့စရာမလိုဘူး၊ NLD တစ်ခုထဲနဲ့ အစိုးရပြန်ဖွဲ့နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားသွားမယ်"
လက်ရှိ အနိုင်ရပါတီ၊ ခု လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ထောက်ခံမှုအားကောင်းနေဆဲ ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ပြောသွားတဲ့ စကားတွေပါ။
ကိုုယ့်အမျိုးသား တန်းတူရေးပန်းတိုင်ဆီကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် အစဉ်တစိုက် ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲတစ်ပွဲထဲနဲ့ စိန်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောခံရဖို့သက်သက်နဲ့ ဒီခရီးကို ဆက်ခဲ့ကြတာလားဆိုတာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ရော၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့ရော ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက သုံးသပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
PDF ဖိုင် ဒေါင်းလုပ်ရန် RELEASED: October 21, 2020
Electoral System ataCrossroads
This paper examined the effect of the current first-past-the-post (FPTP) electoral system as compared toapotential proportional representation (PR) electoral system on the level of representation using the election result from the 2015 general election. The paper aims to demonstrate which electoral system would be fairer and createabetter representation for diverse communities. Ultimately, the goal is to strengthen representative democracy through fair election results.
In short,abetter representation isamore diverse parliament. A more diverse parliament isamore inclusive institution, and collective decision making which are allastep towards not onlyastronger democracy, but alsoapossibility of social cohesion and national reconciliation.
Read in English (Download the PDF) RELEASED: October 14, 2020
ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်လျော်ညီသော ပြောင်းလဲမှုမျိုးသည်သာ NLD အတွက် အဓိကဦးစားပေးဖြစ်နေပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ ပြတ်သားမှုရှိမနေဘူးဆိုတာကို လက်ရှိအာဏာရ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပြင် ယခုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းပါ ကတိကဝတ်တွေကို လေ့လာကြည့်ခြင်းဖြင့်ပါ သိနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအနေနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ကိုပဲ ဆက်လက်အားကိုးဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းရင်းရှိသလားဆိုတာကို ဒီစာတမ်းထဲမှာ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ထားပါတယ်။
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: September 30, 2020
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အဲ့ဒီ ပုံစံအမျိုးမျိုးရဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်တွေကို အခြေခံတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ စွန့်စားမှုတွေက ဘာတွေလဲ၊ အဲဒီစွန့်စားမှုတို့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ စီမံနိုင်မလဲ၊ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ် ပိုမို ထိရောက်အောင်မြင်စေဖို့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကို သုံးသပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သေဘာတူစာချုပ်ကတစ်ဆင့် အသွင် ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ စွန့်စားမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အဲဒီစွန့်စားမှုတွေဟာ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေတွေနဲ့ ရောလျှက်နေပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကို အမိအရယူနိုင်မှဘဲ လက်ရှိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မပါဝင်လာ သေးတဲ့ အဖွဲ့တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ယုံံကြည်မှုတွေ အမှန်တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ရေရှည်တည့်တံတဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစတဲ့ အသွင် ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်တွေကို တဆင့်ချင်းစီ တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: September 7, 2020
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်ထောင်စုဆီသို့
၁။ လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ လဲ။ ဘာကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တာလဲ။
၂။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စဉ်းစားတဲ့နေရာ အထောက်အကူဖြစ်စေ မယ့် အခြေခံမူတွေကဘာလဲ။
၃။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ လုံခြုံရေးကဏ္ဍနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဘယ်လို ချဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်ကြသလဲ။
စည်းလုံးညီညွှတ်မှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ဒီမိုကနေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဝါဒတွေ ခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကူးအပြောင်းကာလမှာ အဓိက ကျတဲ့ လုံခြုံရေးကဏ္ဍကို ဖက်ဒရယ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကို အခြေခံပြီး သုံးသပ်ထားတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖတ်ရန် RELEASED: August 8, 2020
EnvisionaSecurity Sector Reform: Towardabetter federal democratic union
What are the challenges of the current security sector and why does it needareform?
What kind of principles are helpful in thinking about the country’s security system?
What approaches do federal democratic countries around the world take regarding their security sector?
This paper explored and examined the aforementioned questions with an intention to assist the process for security sector reform based on key federal and democratic principles in order to consolidate unity, sovereignty, democracy and federalism in the future.
Read in English RELEASED: August 8, 2020
“တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများသည် မူဝါဒများမပါရှိဘဲ လူမျိုးဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု သက်သက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရနိုင်ရန် မလုံလောက်တော့ကြောင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ဥပမာများက ပြသနေသည်။ အကြောင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်များ သည် လူမျိုးဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုထက် ၄င်းတို့၏ နေ့စဉ် ဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို ပိုမိုအားရုံစိုက် အလေးထားလာကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ” (စာမျက်နှာ ၈)
ကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ မည်ကဲ့သို့သော မဲဆွယ်ဗျူဟာများ အသုံးပြုကြသနည်း။
တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း၊ လူမျိုးဖြစ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံမည့်အစား မူဝါဒအပေါ် အခြေခံသည့် မူဝါဒများ အဘယ်ကြောင့် ပိုမို အရေးပါလာသနည်း။
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် မည်သို့ ထိရောက်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးကြမည်နည်း။
လွတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်နေရာများ ပိုမိုအနိုင်ရရှိစေရန် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ မည်ကဲ့သို့သော နည်းနာများကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရည်ရွယ်၍ သံလွင်ပြည်သူ့ရေးရာ မူဝါဒ လေ့လာရေးအဖွဲ့မှာ ဤစာတမ်းကို ရေးသားပြုစုထားပါသည်။
ျမြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုရန် PDF ဖိုင်ကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ English
RELEASED: July 29, 2020​
How did Korea respond to the COVID-19 crisis?
This week, we looked at how the Republic of Korea has responded to Covid-19 Pandemic. This commentary by Shine Ko Ko Lwin discussed the effectiveness of legislative, executive and administrative responses of the Government of Korea. It also discussed how the citizen of Korea and civil society organizations collaborated and cooperated with their government.
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: July 18, 2020
How did Taiwan handle the COVID-19 crisis?
This latest commentary by Nu Tsen Mun sheds some important lights on Taiwan's successful efforts to control the spread of COVID-19 and potential lesson Myanmar can learn from its experience. The most notable thing was that important of long-term, systematic, data collection discussed in section two of the commentary.
Read in Burmese (Download the PDF) RELEASED: July 14, 2020
How did Vietnam handle the COVID-19 crisis?
Please see the latest commentary by Naw Gladys Maung Maung of Salween Institute for Public Policy on this very important topic. The commentary sheds some important lights on Vietnam's strength and weaknesses in its efforts to control the spread of COVID-19 in the country.
Read in Burmese. . . (Download the PDF) RELEASED: July 10, 2020
​“Pure appeals to ethnicity without policies are becoming increasingly inadequate for ethnic political parties to win elections because voters are responding less to the appeals to ethnicity and more to the policy promises that affect their day-to-day lives.” (Page 8)
How have the campaign strategies of ethnic political parties evolved around the world?
Why has it become important for campaign strategies to be policy based rather than identity-based?
How can ethnic political parties effectively campaign in their targeted constituencies?
​What approaches should ethnic political parties take in order to increase the quantity of representation in the national parliament?
Intending to reach ethnic political parties and CSOs that are assisting the process of strengthening democracy in Myanmar, the Salween Institute of Public Policy addresses these questions in our newest publication:
“Getting Ready for the 2020 General Election: Ways to Improve the Campaign Strategies of Ethnic Political Parties in Myanmar”.
Read in Burmese (Download the PDF)
Read in English (Download the PDF) RELEASED: July 2, 2020
A policy paper by the Salween Institute for Public Policy in partnership with the Women's League of Burma
Read more... (Download the PDF) RELEASED: January 2018
Understanding Street Vending in Downtown Yangon
A Policy Paper by the Salween Institute for Public Policy
This paper explores the socioeconomic life of Yangon street vendors, as well as problems caused by those street vendors. Simultaneously, this paper examines the new policies on street vendors of Yangon regional government as well as how they are carrying out the policy changes, and explores the impact of those policy changes.
In addition, the future plans and designs of the regional government for vending businesses are also included in this paper asatopic of urban planning for the future.
Read in English or Burmese (Download the PDF) RELEASED: July 2017
Prospects for Peace: Challenges and Opportunities for the Myanmar Peace Process
By Tabea Campbell Pauli
It has been over halfayear now since the democratic transfer of leadership to Aung San Suu Kyi’s NLD government, giving citizens, stakeholders and onlookers an idea of the direction and progress of peacebuilding in Myanmar. Recent resurgences of conflict in several ethnic states, as well as accusations of violence against civilians by the Tatmadaw (Myanmar’s military), have been taken asatest of will and ability of the government to confront these issues and hold military forces accountable to the nation’s laws and constitution.
Read in English (Download the PDF) RELEASED: December 2016